‘सुनौला हजार दिन लक्षित घर–घरमा करेशाबारी तयार गर्दैछौं’ - SatyaPatrika
‘सुनौला हजार दिन लक्षित घर–घरमा करेशाबारी तयार गर्दैछौं’
२०७७ माघ ७, बुधबार प्रकाशित
सुर्खेतको लेकबेशी नगरपालिकाले अन्य विकासे गतिविधिसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सुधार ल्याउन थालेको छ । हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य शिक्षासँगै उपचार सेवा दिन नगरपालिका प्रयासरत छ । हाल हरेक नागरिक आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुगेका छन् । हरेक वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भएका छन् । विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल निर्माण प्रक्रियामा छ । पहिलेको तुलनामा हाल स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति र औषधि अभाव छैन । नगरपालिकाले सुनौला हजार दिन अवधिका आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यानमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको नगरउपप्रमुख शान्ती छन्तेलले बताईन् । उनीसँग गरिएको कुराकानी सारांश :
सुनौला हजार दिन अवधिलाई लक्षित गरी के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ?
सुनौला हजार दिन अवधिका आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणमा सुधारका लागि उपमेयर कोशेली तथा भेटघाट कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । जसअन्र्तगत तीन प्रकारका आमाहरु जस्तैः ६ महिनाभित्रको बच्चा भएको आमा, दुई वर्ष पुरा भएको बच्चाको आमा र सत्केरी अवस्थाका १५ दिनभित्रका बच्चाका आमालाई छनोट गरेर समूह बनाएका छौं । सोही समूह अन्र्तगत विभिन्न कार्यक्रम तथा सिकाई आदानप्रदान हुन्छ ।
समूहमा रहेका आमाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न के कस्ता प्रयास भएका छन् ?
यसमा हरेक आमा समुहमा तीन जना आमाहरुलाई उदारणीय आमाको रुपमा पालिकाको तर्फबाट सबै प्रकारका खानेकुरा लगेर दिने गरेका छौं । हजार दिने आमा भएकै घरमा आमा समुहको भेला गरेर पोषिला खानेकुराहरु दिने गर्छाै । साथै विभिन्न विषयमा अन्र्तक्रिया पनि गछौं । किन पोषिला खानेकुरा दिइएको हो ? यसले के फाईदा गर्छ ? भन्ने बारेमा आमाहरुलाई राम्रोसँग बुझाउछौ । जसले गर्दा पछि आउने आमाहरुले पनि सिक्न सकुन भन्ने उद्देश्य राखेका छौं । हरेक बार चार समुहका खानेकुरा खानुपर्छ भनेर नगरपालिकाले सिकाईका रुपमा त्यस्ता खानेकुराहरु उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
यती कुरा त परिवारले पनि ध्यान दिन सक्थ्ये । तर कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
खासमा गाउँघरतिर सनौलो हजार दिनका आमाहरु जसमा सुत्केरी अवस्थामा नछुने, अलग राख्ने, उचित स्याहार नगर्ने जस्ता समस्या छन् । यीनै कारणले सुत्केरीलाई पोषण युक्त खाना र स्वास्थ्यमा ख्याल गरेको पाईदैन । त्यो बेला उनीहरुको ज्यान पनि जानसक्छ । परिवारले बुझेनन् भनेर बस्ने कुरा पनि भएन । उनीहरुलाई बुझाउनु पर्छ भन्ने हो । तसर्थ स्वास्थ्य र खानपानमा उचित ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रेरित गर्नकै लागि भएपनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखियो । र सोही आधारमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
अनी आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा के कस्ता सुधार भए त ?
बच्चालाई प्रसस्त आमाको दुध खुवाउनका लागि खानामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सोच विकास भएको छ । आमाले खानेकुरा नखादाँसम्म दुध पनि आउदैन भन्ने कुरा हाल सबै घर परिवारले बुझेका छन् । सुत्केरी आमाले सबै काम आफै गर्न सक्दैनन् त्यो बेला सहयोग गर्नुपर्छ भनेर परिवारका सदस्यलाई सचेत बनाएका छौं । सुनौला हजार दिने आमा र बच्चाको स्याहार सुसारमा सहयोग पुगेको छ ।
तत्काल देखिने ठुलो परिवर्तन नभएपनि सानो सानो कुरा र उनीहरुको बानी परिवर्तनले दिर्घकालिन समस्या समाधानको बाटो तय भएको छ । तर तत्कालका लागि पनि आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको पाएका छौं । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनपछि उनीहरुमा चेतना स्तर पनि बढेको छ । भने खानपानमा ध्यान दिन थालेका छन् । पहिले आफ्नै बारीमा उत्पादन हुने वा स्थानीय स्तरमा प्रसस्त पाईने झोलिला तथा पोषिला खानेकुरालाई फरक तरिकाले मिठो बनाएर खाने चलन थिएन । हाल खान पनि सिकेका छन् । बजारका भन्दा स्थानीय स्तरमा पाईने खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि उत्तम हुन्छ भन्ने बुझेका छन् । यीनै विभिन्न कुरा परिवर्तन भएको छ ।
अन्त्यमा, स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्रमा गर्नैपर्ने थप योजना केही छन् ?
पहिलो कुरा त आगामी दिनमा पनि यीनै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना छ । घरको धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले थकानका कारण घरमै उत्पादन भएका खानेकुराहरु पनि आमाहरुले बनाएर खान झन्झट मानेको अवस्था छ । यसलाई कसरी सुधार्ने भन्ने योजना बनाउँदैछौं । प्रत्यक आमा समूहको बैठकमा महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविकाले स्वस्थ भएमात्र अरु काम गर्न सकिन्छ भन्ने खालका अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रम चलाउने योजना छ । साथै हरेक घर आगनमा करेशाबारी तयार गर्ने र स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका सिजनल तरकारी तथा खानेकुराहरु पनि मिलाएर खाने कुरामा जोड दिने योजना छ ।
प्रदेश सभा बैठक बसेको तीन मिनेटमै अनिश्चितकालका लागि स्थगित